ကလေးများကိုသွားကျန်းမာရေးအတွက်ဘယ်လိုသင်ပေးမလဲ - Hello Sayarwon
Hello Sayarwon » ကလေးကျန်းမာရေး » ကလေးများကိုသွားကျန်းမာရေးအတွက်ဘယ်လိုသင်ပေးမလဲ
ရေးသားသူ Dr. Sandar Lin ဆေးပညာပိုင်းဆိုင်ရာတည်းဖြတ်သူ Dr. Kaung Thar.
ကလေးများသည်အသက်၂နှစ်မှစ၍သွားကျန်းမာရေးကိုသင် ယူသင့်ပါတယ်။ ကောင်းမွန်သောသွားကျန်းမာရေးဆိုသည်မှာ သွားတစ်နေ့၂ကြိမ်တိုက်ခြင်း၊ နေ့စဉ်သွားကြားထဲရှိအစာ များကိုသန့်ရှင်းခြင်း နှင့် ခံတွင်းသန့်ဆေးရည်အသုံးပြုခြင်း ကိုဆိုလိုပါတယ်။
ငယ်စဉ်ကပင်ကောင်းမွန်သောသွားကျန်း မာရေးအလေ့အထရှိပါကနောင်သွားပြဿနာများကင်းဝေး နိုင်ပါတယ်။
သင်ကိုယ်တိုင်ကလေးနှင့်သွားအတူတိုက်ခြင်းဖြင့်မှန်ကန် သောသွားတိုက်နည်းကိုသင်ပြပါ။ ထိုသို့လုပ်ခြင်းဖြင့်ကလေးများသည်ကောင်းမွန်သော သွားတိုက်နည်းအလေ့အထကိုရ ရှိနိုင်ပါတယ်။
ရောဂါပိုးမွှားများသွားတိုက်တံတွင်မရှိစေရန် သွားတိုက်တံ ကိုအနည်းဆုံး၃လတစ်ကြိမ် လဲလှယ်သင့်ပါတယ်။
ထိုအခါ မျိုးတွင်ကလေးစိတ်ကြိုက်သွားပွတ်တံကိုလဲလှယ်ခိုင်းပါ။ ကလေးကြိုက်နှစ်သက်နိုင်သည့်ရောင်စုံ၊ ကာတွန်းပုံစံသွား ပွတ်တံများကိုလည်းရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။
သွားတိုက်ဆေး ရွေးချယ်ရာတွင်လည်းကလေးကြိုက်နှစ်သက်နိုင်မည့်မွှေး၍ ချိုသောသွားတိုက်ဆေးကိုရွေးချယ်ပါ။
သွားတိုက်ချိန် ၃မိနစ်သည်အသင့်တော်ဆုံးအချိန် ဖြစ်သည်ဟုသွားဆရာဝန်များကဆိုကြသည်။ သွားတိုက်ချိန် တွင်၃မိနစ်စာသီချင်းဆိုခြင်းဖြင့်ကလေးငယ်များပျော်ရွှင်နိုင်ပါ တယ်။
သွားနှင့်ပတ်သက်သောပုံပြင်များကိုအိပ်ရာမ၀င်ခင်ပြောပြခြင်း ခံတွင်းကျန်းမာရေးနှင့်ပတ်သက်သောရုပ်ရှင်များပြသခြင်းဖြင့် ကလေးများသည်ကောင်းမွန်သောသွားတိုက်နည်းအလေ့အ ထရရှိပြီး သွားတိုက်ခြင်းအကျိုးကျေးဇူးကိုသိလာနိုင်ပါတယ်။
ကောင်းမွန်သောသွားတိုက်နည်းအလေ့အထရရှိနိုင်ရန်ခံတွင်း သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပြီးတိုင်းလှပသောstickerပေးခြင်းဖြင့်ဆုချီးမြှင့် လိုက်ပါ။
Hello Health Group သည် ဆေးပညာအကြံပြုချက်များ၊ ရောဂါရှာဖွေအတည်ပြုချက်များနှင့်ကုသမှုများမပြုလုပ်ပေး ပါ။
သင့်တော်တဲ့ စားသောက်မှုမရှိလျှင် အစာခြေစနစ်ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲ
1/5fun ways to teach kids proper dental hygiene: http://www.lifehack.org/447201/5-fun-ways-to-teach-kids-proper-dental-hygiene. Accessed in January 28, 2017.
2/7Ways To Make Dental Hygiene For Kids Fun http://www.colgate.com/en/us/oc/oral-health/life-stages/childrens-oral-care/article/7-ways-to-make-dental-hygiene-for-kids-fun-0613 Accessed in January 28, 2017.
ကလေးများကြီးထွားဖွံဖြိုးရာတွင် အရေးပါသော ဗီတာမင်များ